Lelee ihe nkiri ọhụrụ maka Chris Rocks New Saw Movie Spiral - Pop Cult
Lelee ihe nkiri ọhụrụ maka okirikiri ihe nkiri ọhụrụ hụrụ Chris Rock na Samuel L. Jackson
Vidiyo pụọ Lionsgate Movies
Chris Rock s reboot nke Hụrụ franchise anatala ihe nkiri ọhụrụ Samuel L. Jackson.
Gburugburu: Site n'Akwụkwọ nke Saw bụ nrụnye nke itoolu n'usoro, ntụgharị uche sitere na Rock n'onwe ya, nke na -ewe Hụrụ ihe nkiri na -atụghị ụjọ na n'ihu ihe egwu egwu -centric thriller. Max Minghella, Marisol Nichols, na Zoie Palmer rụkwara ọrụ na Darren Lynn Bousman. Bousman bụ Hụrụ pro, na -enye aka n'afọ 2005 Saw II -Nke o dere ma duzie ya - na ihe nkiri sochiri Ahụhụ III na Nkeji IV.
Lionsgate na -akọwa Gburugburu dị ka isi ọhụrụ na -emenye ụjọ nke akwụkwọ Hụrụ , ebe onye oke obi ọjọọ na -ewepụta ụdị ikpe ziri ezi gbagọrọ agbagọ. Per IndieWire , nchịkọta akụkọ na -aga n'ihu, na -arụ ọrụ na ndò nke onye uwe ojii a na -akwanyere ùgwù (Jackson), onye na -achọpụta ihe ọjọọ Ezekiel Zeke Banks (Rock) na onye mmekọ rookie ya (Minghella) na -ahụ maka nyocha dị egwu banyere ogbugbu ndị na -echetara ndị obodo ihe ọjọọ n'oge gara aga. . N'amaghị ama n'ime ihe omimi miri emi, Zeke hụrụ onwe ya n'etiti egwuregwu na -egbu egbu.
Nke mbụ Hụrụ debuted na 2004 ma James Wan duziri ya. Mgbe nke ahụ gasị, ntinye ọhụrụ na-abịa kwa afọ site na 2010, tupu franchise ahụ weere ezumike afọ asaa wee kaa akara nlọghachi ya na afọ 2017 Jigsaw . Gburugburu ebido ebido wepụta na Ọktọba 23, 2020 mana agbagoro ya ruo Mee 15, 2020 ka etinyere ya na slate nkiri oge ọkọchị. N'ihi ọrịa na -efe efe, ihe nkiri a ga -abata ugbu a na Mee 14, 2021.
Lelee ụgbọala na -adọkpụ n'elu.
milk milk nicki minaj gbawara
esi eme kuki jụrụ oyi dị ka ụlọ ahịa
ogologo site na compton eazy na ọnwụ
travis scott jordan 1 obere ibe